Home Somali News Somaliland:Danjire Kaysar Cabdilaahi Oo Si Weyn Loogu Soo Dhaweeyay Hargeysa
Safiirka wareega ee Somaliland Kaysar Cabdilaahi Maxamed oo fadhigiisu yahay dalka Ingiriiska oo uu saacido dhaqdhaqaaqyadda aqoonsi raadinta dalka, ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay madaarka Hargeysa.
Waxa danjiraha si diiran ugu soo dhaweeyay caasimadda Masuuliyiin ka tirsan Xukuumadda iyo dhalinyarro, waxaana ka mid ahaa madaxdii soo dhawaysay Wasiir-ku xigeenka wasaarada Qorshaynta qaranka Md. Cabdikariin Axmed Mooge, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Maxamed Cilmi Aadan (Ilka Case), agaasimaha guud ee wasaaradda xannaanada xoolaha Dr. Jaamac Maxamed Odowaa, Maareeyaha Telefishanka qaranka Md. Khadar Xasan Cali Gaas iyo madax-dhaqameed.
Safiirka wareega ee Somaliland Md. Kaysar Cabdilaahi oo halkaas hadal kooban ka jeediyay ayaa waxa uu ka mahad celiyay sida diiran ee loo qaabilay, waxaanu yidhi “Waxaan maanta ku faraxsanahay in la igu soo dhaweeyay dalkaygii hooyo, waxaan si kal iyo laab ah ugu mahad-celinayaa Madaxda iyo dadka kale ee iga hor yimid-ba.”
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda Qorshaynta qaranka Md. Cabdikariin Axmed Mooge, oo ka hadlay soo dhawaynta danjire Kaysar, waxa uu yidhi “Safiirku Waxa uu ka mid yahay dadka qiimaha leh ee reer Somaliland ee haddii ay joogaan iyo haddii ay maqan yihiinba dalkooda wax u qabta, anigoo taas ixtiraamaaya ayaan halkan ku soo dhawaynayaa Safiirka wareega ee Somaliland, waxa aan leeyahay in aan ku soo dhawyno waad naga mudan tahay ee Safiir soo dhawoow.”
“Maanta waxa noo farxada ah in aan soo dhawayno safiirka wareega ee Somaliland oo ah, waxaan ku leeyahay soo dhawoow dalkaaga iyo dadkaaguba way ku ogyihiine.Kollay waa noo farxad in aanu ku qaabilo, waxaanu adiga iyo jaaliyadda reer Cardiff ee wadanka Ingiriiskaba ku bogaadinaynaa hawshii qaran ee aad qabateen ee Golaha deegaanka magaalooyinka Sheffield iyo Cardiff innagu aqoonsadeen-ba,”ayuu yidhi agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Md. Dr. Jaamac Maxamed.
Waxa isaguna ka hadlay Agaasimaha guud ee wasaaradda Warfaafinta Maxamed Aadan Cilmi (Ilkacase).
Cajiib: Waxaanu Leenahay Madaxweyne Mo Faarah Ka Dheereeyey, Waxaanu Leenahay Madaxweyne Diyaaradaha Wax Ku Dhex Akhrista ” Maayar Ku Xigeenka Caasimada + Muuqaal